स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives | Page 183 of 193 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
‘डगी’ स्टाइलमा सेक्स गर्दा लिङग फ्याक्चर
डगी स्टाइलमा सेक्स गर्दा धनकुटाका एक युवाको लिङग फ्याक्चर भएको छ । उनको धरानको एक स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको छ । लिङग फ्याक्चर भएका ती युवा सँग ब्लाष्टकर्मीकोपनि भेट भएको थ... Read more
पहिलो रात शारीरिक सम्पर्क गर्न खोज्दा पतिको लिंग नै उत्तेजित नभएपछि…
शंकाको वातावरण सिर्जना भयो । रुपलाई आफ्नो यौन लाचारीप्रति हिनताबोध हुन थाल्यो भने रुपालाई आफ्नो पहिलो यौन सुख नै लुटिएको पीडाले सताउन थाल्यो । उनलाई आफू अब आजीवन यौनसुखबाट बञ्चित पो हुने हुँ... Read more
सेक्स गर्दा योनीभित्रै विर्य झ-यो ? चिन्ता नलिनुहोस यसो
उपयोगी टिप्स : मैनावारी भएर कति दिनपछी सम्भोग गर्दा गर्भ रहदैन ? थाहा पाउनुहोस् गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै य... Read more
सेक्स गर्दा तपाईंको बृय छिटो खस्छ भने टेन्सन नलिनुहोस यस्तो गर्नुस !
यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर... Read more
गर्मीमा छालाको समस्यामा नगर्नुहोस् जथाभावी उपचार
मौसममा तापक्रम वृद्धि भएसँगै सहरी क्षेत्रका धुवाँ–धुलोको प्रदूषण पनि बढ्न थालेको छ । गर्मी मौसममा घाम र धुवाँ–धुलोले चिसो मौसममा भन्दा बढी असर गर्न सक्छ । नियमित गर्नुपर्ने कतिपय काम नगर्दा... Read more
पहिलो यौनसम्पर्क नभुल्न मन छ ? यसरी सुरु गर्नुहोस यौनसम्पर्क
यौनसम्पर्क गर्ने धेरै तरिका र आसनहरु छन् । तर यौनसम्बन्धको समय तपाईं र तपाईंको साथी दुवैको साथ भएमा जस्तोसुकै आसनमा पनि आनन्ददायी यौनसम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । तर यो गाह्रो बिषय हो । तपाईं स... Read more
यौनसम्पर्कको समयमा पुरुषसँग नगर्नुस यस्ता कुराहरु
यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्रममा यस्ता कयौं कुराहरु हुन्छन्, जुन महिलाले नभन्नु नै उचित हुन्छ । यौन मनोविद्हरुका अनुसार केही यस्ता कुराहरु छन् जुन पुरुषहरुले यौनसम्पर्कको समयमा सुन्ननै चाहाँ... Read more
बजारमा पाइने इनर्जी ड्रिंक भनिएको एउटा पेय पदार्थ । तर डेनमार्क र फ्रान्समा ब्याण्ड भएको यो पेय पदार्थ नेपालमा भने खुलेआम विक्री भइरहेको छ । अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के हो भने रेडबुलमा गोरुको व... Read more
स्तनपान गराउँदा हुने १० फाइदा र आमालाई १० सुझावहरू
बच्चा जन्मिएको कम्तिमा ६ महिनासम्म बच्चालाई आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्छ। बच्चालाई औषधि वा जीवनजल आवश्यक परेको बेलामा दिन सकिन्छ। तर, सकभर नवजात शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउनु राम्रो हो। विश... Read more
यौनसम्पर्क गर्नका लागि युवती यसरी फकाउनुहोस
यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु हुने गर्छन् । ती अध्ययनबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि राजी बनाउने भन्ने ब... Read more